04/22/12 ~ The Ahmadi Post : Myanmar
Muslims who believe in the Messiah, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian.
ခရစ်ယာန်သာသနာဝင်များ၏အစ္စလာမ်အတွက်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ဆိုင်ရာမေးခွန်းကြီး ၆ ခု
April 22, 2012 admin No comments
ခရစ်ယာန် သာသနာပြုတစ်ဦး၏ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်အားအခြေခံကာ အစ္စလာမ်သာသနာတော်အား မေးခွန်းထုတ်ထားမှုများကို အဟ်မဒီယာဂျမာအဟ်၏ အကျော်ဒေးယျတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဂူလာမ်ရစူလ်ရာ ဂျီကီမှ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်အားဖြင့်ပင် ရှင်းလင်းပြတ်သားတိကျစွာပြန်လည်ဖြေရှင်းထားသည့် စာတမ်း ဖြစ်ပါသည်။
Open publication - Free publishing - More ahmadiyyat
April 22, 2012 S.M Osman No comments
ဘာသာတရားတွေဟာ ယနေ့မျက်မှောက်တွေ့ကြံနေရတဲ့ ပြဿနာအမြောက်အများရဲ့ အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဘာသာတရား တစ်ခုချင်းစီတိုင်းက သူတို့သာလျှင် လူသားထုတစ်ခုလုံးအတွက် သင့်တော်တဲ့ ဘာသာ သာသနာဖြစ်ကြောင်း ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်လုနေကြပြီး ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ ညီညွတ်မှုကို မဖော်ဆောင်နိုင်ပဲ အမုန်းတရားနဲ့ ကွဲပြားမှုတွေသာ သယ်ဆောင်လာတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။
သတိပြုရမယ့် အချက်တစ်ခုက ကျွနု်ပ်တို့နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ အလွန်လျင်မြန်စွာနဲ့ပဲ ကမ္ဘာ့ရွာကြီးတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်လာနေပါတယ်။ ယနေ့ကာလမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာအမြောက်အမြားဟာလည်း အဲ့ဒီအချက်အပေါ်အခြေခံပြီးထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်မီတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ကူးသန်းသွားလာမှုနည်းပညာအသစ်တွေကြောင့် လူသားမျိုးနွယ်တွေဟာ မျိုးနွယ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု သီးခြားကင်းကွာနေတာမျိုးမရှိတော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ခေတ်ကာလရဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာတာက လူသားမျိုးနွယ်တွေဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာ နေထိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် သူတို့ဟာ စစ်မှန်တဲ့ ညီအကိုတွေဖြစ်လာရပါမယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက် သဟဇာတဖြစ်အောင် ညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအမြောက်အမြားလိုအပ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ လူသားတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးဆက်ဆံရာမှာ ထိန်းကျောင်းလမ်းညွှန်ပေးမယ့် လမ်းညွှန်ချက်အချို့ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးက ငြိမ်းချမ်းမှုကိုလိုလားကြပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းမှုကိုတော့ ဘာသာရေးကတဆင့်ပဲရရှိနိုင်ပါတယ်။ ယနေ့မျက်မှောက်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေရဲ့ အကြောင်းခံက ဘာသာတရားတွေကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်အကြောင်းအရင်းကတော့ ဘာသာတရားကို လွဲမှားစွာ အသုံးပြုမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာတရားဆိုတာ ထာဝရဘုရားရှင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ ယုံကြည်မှုစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတရားမှာ ရှိခိုးဝတ်ပြုမှုနဲ့ လိုက်နာကျင့်ကြံရမယ့် နည်းဥပဒေသတွေပါဝင်ပြီး ယင်းတို့အားဖြင့် ထာဝရဘုရားရှင် (အလ္လာဟ်) နှင့် နီးစပ်မှု ရှိလျှက် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘဝကို ဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လူသားထုတစ်ခုလုံးရဲ့ ယနေ့ခေတ်ကာလ လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် ယုံကြည်မှုက မျိုးနွယ်ကန့်သက်ချက်၊ တိုင်းပြည်ကန့်သက်ချက်၊ ယဉ်ကျေးမှုကန့်သက်ချက်တွေကို ကျော်လွန်နိုင်ရပါမယ်။ ဒါ့အပြင် ကျယ်ပြန်တဲ့သဘောထားနဲ့ လူသားကို သင်ကြားမှုပေးရပါမယ်။ အစ္စလာမ်သာသနာဟာ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာဟာ ခုလို မုက္ခပတ်တော်နဲ့ အစပြုပါတယ်။
"စကြဝဠာကမ္ဘာအပေါင်းကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်သာလျှင် ချီးမွမ်းထောမနာပြုခြင်းအပေါင်းကို ခံထိုက်တော်မူ၏။" (ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ အခန်းကြီး ၁ ၊ အခန်းငယ် ၂)။
ဒီမုက္ခပတ်တော်က ကျမ်းစာဖတ်ရှုတဲ့သူကို ထာဝရဘုရားရှင်တစ်ပါးတည်းရဲ့အောက်မှာ စကြာဝဠာနဲ့ လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးစုစည်းပေါင်းစပ်မှုသဘောတရားကိုဖော်ပြပါတယ်။ အစ္စလာမ့်သတင်းစကားဟာ လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုတည်းမှာပဲ ကန့်သတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကမ္ဘာ့လူသားထု တစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာမှာ လာရှိတာက ...
"အိုလူသားမျိုးနွယ်အပေါင်းတို့! ကျွန်ုပ်သည် ကောင်းကင်နှင့် ကမ္ဘာမြေပြင်တို့ကို စိုးပိုင်တော်မူသော ထာဝရဘုရားရှင် (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်) ထံတော်မှ စေလွှတ်ခြင်းခံရသူ ဧကန်အမှန်ဖြစ်ပေသည်။ ထိုအရှင်မြတ်မှတပါး အခြားသော ဘုရားမရှိပေ။ ထိုအရှင်မြတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အသက်ရှင်ခြင်းကိုပေးတော်မူသကဲ့သို့ ကျွနု်တို့အား သေဆုံးစေတော်မူသောအရှင်လည်းဖြစ်တော်မူ၏။ " (ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ အခန်းကြီး ရ ၊ အခန်းငယ် ၁၅၉)။
တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်(သခင့်အပေါ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းသက်ရောက်ပါစေ) ပွင့်ပေါ်ထွန်းခြင်းကို ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာမှာ အခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
"အသင့်အား လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးအတွက် မေတ္တာရှင်အဖြစ်စေလွှတ်တော်မူ၏။" (ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ အခန်းကြီး ၂၁ ၊ အခန်းငယ် ၁ဝ၈)။
ဒါ့အပြင်အစ္စလာမ်သာသနာဟာ လူသားထုတစ်ခုလုံးအတွက် ကျယ်ပြန့်တဲ့ ညီအကိုရင်းချာဖြစ်မှုကို ဖော်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
"လူသားမျိုးနွယ် အားလုံးအတူတကွ ထာဝရဘုရှားရှင်၏ ကြိုးကိုမြဲမြံစွာ ကိုင်ထားကြလေကုန်။ အသင်တို့အချင်းချင်း ကွဲပြားမှုမရှိကြကုန်လေနှင့်။ ထာဝရဘုရားရှင်၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်ကို သတိရကြကုန်။ ထိုထက်အရင်က အသင်တို့သည် အချင်းချင်းရန်သူများဖြစ်၍ကွဲပြားလျှက်ရှိကြကုန်၏။ အသင်တို့အချင်းချင်းညီအကို ရင်းချာသဖွယ်ဖြစ်လာကြစေရန် အရှင်မြတ်သည် အသင်တို့နှလုံးသားထဲတွင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ထည့်သွင်း၍ အသင်တို့အား အတူတကွ ပေါင်းစည်းစေတော်မူခဲ့၏။ အသင်တို့အားကျလုနီးပါး နှုတ်ခမ်းပေါ်မှ ကယ်တင်တော်မူခဲ့ပေ၏။ အသင်တို့သည် လမ်းညွှန်ခြင်း ခံရသူများ ဖြစ်စေခြင်းငှာ အရှင်မြတ်သည် အမိန့်ပညတ်တော်များကို အသင်တို့အားဤသို့ရှင်းလင်းပြတော်မူပေ၏။" (ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ အခန်းကြီး ၃ ၊ အခန်းငယ် ၁ဝ၄)။
အစ္စလာမ်သာသနာက လူသားမျိုးနွယ်တွေရဲ့ အသွေးအရောင်၊ လူမျိုး ၊ ဘာသာစကား စတဲ့အရာတွေ ကွဲပြားမှုကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာမှာ လာရှိတာက ....
"အသင်တို့၏ နှုတ်လျှာများကွဲပြားခြင်း(ဘာသာစကား) ၊ အသွေးအရောင်ကွဲပြားခြင်းတို့သည် ကောင်းကင်နက္ခတ်တာရာများနှင့် ကမ္ဘာမြေပြင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသော ထာဝရဘုရားရှင်ရှိတော်မူကြောင်းအမှတ်လက္ခဏများပင်ဖြစ်ပေသည်။ ဆင်ခြင်နားလည်တတ်သူများနှင့် အသိဉာဏ်ဗဟုသုတရှိသူများအဖို့ ဧကန်ပင် အမှတ်လက္ခဏာများဖြစ်ပေ၏။" (ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ အခန်းကြီး ၃ဝ ၊ အခန်းငယ် ၂၃)။
ဒါပေမယ့် အစ္စလာမ်သာသနာက လူသားတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်အရည်အသွေးမြင့်မားမှုကို တိုင်းတာတဲ့အခါ လူသားတွေရဲ့ စည်မျဉ်းအစား ထာဝရဘုရားသခင်က သတ်မှတ်တဲ့ စည်းမျဉ်းဥပဒေအားဖြင့်တိုင်းတာစေပါတယ်။ ရာထူး ဌာနန္တရကြောင့်မဖြစ်ရပါဘူး။ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၊ အသွေးအရောင် စတာတွေနဲ့လည်း တိုင်းတာမှုမပြုရပါဘူး။ ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့စံနှုန်းကတော့ လူသားတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်အရည်အသွေးကို သူ့ရဲ့ ဖြူစင်ဖြောင့်မတ်၊ ရိုးသားမှုနဲ့ တိုင်းတာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာမှာ ဖော်ပြတာက .....
"အိုလူသားမျိုးနွယ်အပေါင်းတို့ ငါတို့(ထာဝရဘုရားရှင်)သည် အသင်တို့အား အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့မှတဆင့်ပေါက်ဖွားစေတော်မူခဲ့၏။ ထို့ပြင်အသင်တို့အချင်းချင်း မှတ်မိစိမ့်သောငှာ လူမျိုးစု အသီးသီး လူမျိုးနွယ်အဖုံဖုံအဖြစ် ပြုလုပ်တော်မူခဲ့ပေသည်။အသင်တို့အထဲတွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်၌ ဧကန်စင်စစ် ဂုဏ်အရှိဆုံးသောသူမှာ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုအရှိဆုံးသောသူပင်ဖြစ်ပေသည်။ အရှင်မြတ်သည် အရာအားလုံးကို အကြွင်းမဲ့သိတော်မူသော အရှင်၊ အမြဲမပြတ်သတိထားတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူပေသည်။" (ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ အခန်းကြီး ၄၉ ၊ အခန်းငယ် ၁၄)။
အစ္စလာမ်က တစ်စုံတစ်ဦးဟာ ဘယ်လိုအသွေးအရောင်၊ မျိုးနွယ်၊ ဇာတ်နိမ့်၊ဇာတ်မြင့်၊ ရဟန်းဘောင်၊ ရာထူးနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၊ ဆင်းရဲမှုစတာတွေ ရှိတာကြောင့် ခွဲခြားမှုမပြုသလို အခွင့်ထူးလည်းမပေးပါဘူး။ အဲ့ဒါတွေအစား အစ္စလာမ်က စစ်မှန်တဲ့ ညီအကိုရင်းချာဖြစ်မှုကို သွန်သင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စစ်မှန်တဲ့ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုနဲ့ လူသားအချင်းချင်းအပြန်အလှန် ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ အပြုအမူများကတဆင့် ထာဝရဘုရားရှင်ရဲ့ နှစ်သက်ကျေနပ်မှုကို ရှာမှီးဖို့ တွန်းအားပေးတိုက်တွန်းပါတယ်။
ဒီအချက်ကို အဟ်မဒီယာ မွတ်စလင်အဖွဲ့ကို တည်ထောင်သူ ဟာဇရတ်မီရ်ဇာ ဂူလာမ်အဟ်မဒ် က အခုလိုကောင်းစွာရှင်းပြထားပါတယ်။
" ကျွန်ုပ်အားလောက၌ စေလွှတ်ခန့်အပ်ထားရသည့် အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ကြီးထွားလာနေသည့် ထာဝရဘုရားသခင်နှင့် ဖန်ဆင်းခံလူသားတို့အကြား အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကွာဟခြင်းကို စစ်မှန်သောရိုးသားချစ်ခင်မှုဖြင့် ထာဝရဘုရားရှင်နှင့် ပြန်လည်နီးစပ်မှုကို အစားထိုးပေးရန်ဖြစ်ပြီး အမှန်တရားအား ရှင်းလင်းထင်ရှားစေရန်၊ ဘာသာရေးစစ်ပွဲများနှင့် မညီမျှမှုများကို အဆုံးသတ်ရန်ဖြစ်ပေသည်။ ယင်းသည် ငြိမ်းချမ်းမှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး လောကီမျက်လုံးများမှ ဖုံးကွယ်ထားခြင်းခံရသော ဘာသာတရား၏ အမှန်တရားကို တဖန်ဖွင့်လှစ်ပြသရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအပြင် လူသား၏ စိတ်အလိုလိုက်မှု အမှောင်ထဲ၌ နှစ်မြုပ်ခြင်းခံထားရသော ဝိညာဉ်ရေးရာ နမူနာများကို တစ်ဖန်ပြန်လည်ပြသရန်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကို ကျွနု်ပ်၏ နှုတ်ထွက်စကားများထက် ကျွန်ုပ်၏ အပြုအမူများအားဖြင့် တစ်နည်းဆိုရသော် ဘာဝနာအားထုတ်ခြင်းနှင့် ဝတ်ပြုခြင်းများမှတဆင့် ထာဝရဘုရားရှင်နှင့် နီးစပ်မှု၊ ထာဝရဘုရားရှင်၏ တန်ခိုးတော်ကို ရှင်းလင်းဖော်ပြပါမည်။" (လာဟိုမြို့၌ ဟောကြားချက်မှ - စာ ၄၇)
ဒါကြောင့်များစွာသော ယနေ့ခေတ်ကာလရဲ့ ပြဿနာများကို ရှင်းလင်းပေးမယ့် တစ်ခုတည်းသောအဖြေကတော့ တစ်ခုသော ကျယ်ပြန့်တဲ့ သဘောထားနဲ့ ဘာသာတရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်က ဒီအချက်ကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် ဘာသာအဖြစ် အခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ အစ္စလာမ့်တရားဒေသနာများကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် လူသားဟာ သူ့ကိုမွေးမြူဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့ ထာဝရဘုရားရှင်ကို သိရှိနိုင်ပြီး ဘဝတူဖန်ဆင်းခံများနှင့် ညီညွတ်စွာ နေထိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာ လူသားတိုင်းအလိုရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလာမ်သာသနာတော် သို့မဟုတ် အစ္စလာမ့်အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
Open publication - Free publishing - More burmese
'ကျွန်ုပ် မှတ်မိပါသေးသည်။ နံနက်ခင်းတစ်ခု၌ဖြစ်၏။ ထိုနံနက်ခင်းသည် ထိတ်လန့်အံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းလေသည်။ အိပ်ရာက နိုးလျှင်နိုးချင်း ကျွန်ုပ် မျက...
" အသက် ၂၅ နှစ်ရောက်မှ လက်ထပ်ဖို့အဆိုပြုနေကြတဲ့သူတွေအားလုံး မှားယွင်းပါတယ်။ " (ဆော်ဒီ မုဖ်သီချုပ်) The World Observer က ဆော်ဒီအာ...
ဟာဇရတ် မေရ်ဇာ ဂူလာမ် အဟ်မဒ်သခင် အေမာမ် မဟ်ဒီဆိုတဲ့ စကားရပ်မှာ အေမာမ်နဲ့ မဟ်ဒီ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ အေမာမ်ဆိုတာကတော့ အာရဗီစကားလုံ...
အစ္စလာမ်တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ) နှင့် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် အစ္စလာမ်၏အနက်အဓိပ္ပာယ်မှာ " ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့် အလ္လာဟ်အရ...
တကယ်လို့ (ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ) နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဦးစွာပထမကတည်းက ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကြေငြာခဲ့မှာဖြစ်တယ်
ခလီဖာသခင်ပြောတာက တစ်ချို့အဟ်မဒီတွေဟာ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို ပလိပ်ရောဂါ ပုံစံမျိုးပဲလို့ပြောကြတယ်။ တစ်ချို့လည်း ဒါဟာ ပလိပ်ရောဂါနဲ့အလားတူတဲ့ နိမိတ်...